Kushanda Naiyo .htaccess File Mune WordPress | Martech Zone
WordPress chikuva chakakura chinoitwa zvese zviri nani nekutsanangurwa uye kusimba kweyakajairika WordPress dashibhodhi iri. Iwe unogona kuwana zvakawanda, maererano nekugadzirisa nzira iyo yako saiti inonzwa uye mashandiro, nekungoshandisa zvishandiso zvakaitwa neWordPress kwauri seyakajairwa.
Kunouya nguva muhupenyu hwese hwemuridzi webhusaiti, zvisinei, apo iwe pauchazofanira kuenda kupfuura kuita uku. Kushanda neiyo WordPress .htaccess faira inogona kuva imwe nzira yekuita izvi. Iyi faira iri yepakati faira iyo yako saiti inovimba nayo, uye inonyanya kunetsekana nemabatiro anoita zvibvumirano zvewebsite yako.
Iyo .htaccess faira inogona kushandiswa kuzadzikisa zvinhu zvinoverengeka zvinobatsira, zvakadaro. Isu takambovhara zvimwe zvacho, kusanganisira maitiro ekugadzira regex inodzosera muWordPress, uye ongororo yakawandisa pane musoro unodzoreredza WordPress. Mune ese maviri aya magwara, takawana nekugadzirisa iyo .htaccess faira, asi tisingatsanangure zvakawanda nezvekuti nei faira riripo pakutanga, uye nemashandisiro aungaita.
Ndicho chinangwa chechinyorwa chino. Kutanga, tichatarisa zvinoitwa neiyo .htaccess faira mune yakasarudzika WordPress setup. Ipapo, isu tichatsanangura maitiro aungaiwana iyo, uye nemabatiro aungaigadzirise. Chekupedzisira, isu tinokuratidza nei iwe ungade kuzviita izvo.
Chii chinonzi Faira .htaccess?
Ngatitorei mabhesiki kubva munzira kutanga. Iyo .htaccess faira haisi yehunyanzvi a WordPress faira. Kana, kuti uzviise zvakanyatsonaka, iyo .htaccess faira iri chaizvo faira iro rinoshandiswa neApache webhu server. Iyi ndiyo system parizvino iri kushandiswa nehuwandu hwakawanda hweWordPress saiti uye mauto. Nekuda kwekuwanika kweApache kana zvasvika pakutungamira WordPress saiti, yega yega saiti yakadaro ine .htaccess faira.
Iyo .htaccess faira inogovera mamwe maitiro pamwe nemamwe mafaera ayo ako eWordPress saiti anoshandisa kumisikidza. Iro zita rezita iri faira rakavanzika uye rinofanira kunge risingazivikanwe kuti rigadziriswe. Iyo zvakare inogara mumidzi dhairekitori reWebhusaiti yako saiti.
Rangarira, iyo .htaccess faira inoita chinhu chimwe uye chinhu chimwe chete: inosarudza kuti zvibvumirano zvesaiti yako zvinoratidzwa sei. Ndizvo.
Chakavanzika kuseri kwetsananguro yakapusa iyi yakaoma kunzwisisa, zvakadaro. Izvi zvinodaro nekuti varidzi vazhinji vesaiti, plugins, uye madingindira anoita shanduko munzira iyo ma permalinks anoshandiswa mukati meako WordPress saiti. Nguva dzese iwe (kana plugin) paunoita shanduko munzira iyo ma permalinks anoshanda, shanduko idzi dzinochengetwa mu .htaccess faira.
Kutsvaga Uye Kugadzirisa Iyo .htaccess Faira
Kunyangwe paine iyo .htaccess faira inonyanya kugadzirirwa kubata zvibvumirano panzvimbo yako, unogona kugadzirisa iyo faira kuti uwane mibairo yakawanda inobatsira: izvi zvinosanganisira kugadzirisazve, kana kungovandudza chengetedzo pane yako saiti nekuderedza kunze kwekuwana mamwe mapeji.
Muchikamu chino, tinokuratidza maitiro ekuzviita izvozvo. Asi kutanga…
Yambiro: Kugadziridza iyo .htaccess faira kunogona kutyora webhusaiti yako.
Kuita chero shanduko kumafaira akakosha ayo saiti yako inomhanya kune njodzi. Unofanira gara uchichengetedza saiti yako usati waita chero shanduko kwariri, uye edza pasina kukanganisa saiti mhenyu.
Muchokwadi, pane chikonzero chakanaka nei iyo .htaccess faira isingawanikwe kune vazhinji vashandisi veWordPress. WordPress ine yakajeka chikamu chemusika wemabhizimusi madiki webhusaiti, uye izvi zvinoreva kuti vazhinji vevashandisi vavo, tichati here, kwete ivo vane hunyanzvi hwakanyanya. Ichi ndicho chikonzero iyo .htaccess faira rakavanzwa nekutadza - kudzivirira vashandisi vevashandi vanoita zvikanganiso.
Kuwana Uye Kugadzirisa Iyo .htaccess Faira
Nezvese izvo zviri munzira, ngatitarisei kuti ungawana sei iyo .htaccess faira. Kuti uite izvozvo:
Gadzira kubatana kune webhusaiti uchishandisa FTP mutengi. Kune akawanda emahara, makuru maFTP vatengi kunze uko, kusanganisira FileZilla. Verenga kuburikidza zvinyorwa zvakapihwa kuti uite kubatana kweFTP kune yako saiti.
Paunenge iwe watangisa kubatana kweFTP, iwe unozoratidzwa mafaera ese anoita yako saiti. Tarisa uone kuburikidza nemaforodha aya, uye iwe uchaona imwe inonzi dhairekitori remidzi.
Mukati meiyi folda, iwe uchaona yako .htaccess faira. Izvo zvinowanzo kuve padyo nepamusoro pechinyorwa chemafaira mune iyo folda. Dzvanya pafaira, wobva wadzvanya kuona / kugadzirisa.
Iyo faira ichavhura mune iwo mavara edhita.
Uye ndizvozvo. Iwe ikozvino unobvumidzwa kuita shanduko kune yako faira, asi cherekedza iwe ungangodaro usade kuita izvozvo. Tichakuratidza mashandisiro aungaita iyi faira muchikamu chinotevera, asi tisati taita iri zano rakanaka gadzira kopi yemuno Yako .htaccess faira (uchishandisa yakajairwa "sevha se" dialog), ita shanduko dzako munharaunda, uye wozoisa iyo faira kune yakatarwa saiti (sezvataona pamusoro).
Uchishandisa Iyo .htaccess Faira
Iye zvino wagadzirira kutanga kushandisa mamwe mabasa anopihwa neiyo .htacess faira. Ngatitangei kubuda nezvakakosha mashoma.
301 inodzosera - Iyo 301 inonongedza chidimbu chidiki chekodhi iyo inotumira vashanyi kubva kune rimwe peji kuenda kune rimwe, uye zvinodikanwa kana iwe ukachinjisa imwe blog blog iyo inosunganidzwa kubva kune yekunze saiti. Neimwe nzira, iwe unogona kushandisa iyo .htaccess faira kudzosera iyo webhusaiti. Iwe unogona zvakare kutungamira vashanyi kubva kune yekare HTTP vhezheni yesaiti kune itsva, yakachengeteka, vhezheni yeHTTPS. Wedzera izvi kune .htacess faira:
chibatiso - Kune zvekare nzira dzinoverengeka dzekushandisa iyo .htaccess faira kushandisa epamberi nzira dzekuchengetedza dzeWP. Imwe yeiyi ndeye kiya pasi kupinda kune mamwe mafaera kuitira kuti vashandisi chete vane chokwadi chechokwadi vagone kuwana iwo epamoyo mafaera ayo ako eWordPress saiti anomhanyisa pairi. Iwe unogona kushandisa kodhi iyi, yakanamatira kusvika kumagumo efaira rako .htaccess, kudzikamisa kuwana kune akati wandei mafaira epakati:
Chinja ma URL - Chimwe chinobatsira cheiyo .htaccess faira, kunyangwe imwe yakaoma kushandisa, ndeyekuti iyo faira inogona kushandiswa kudzora nzira iyo ma URL anoratidzwa kana vashanyi vako vawana saiti yako. Kuti uite izvozvo, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti uri kushandisa yazvino vhezheni yeApache. Izvi zvinoita kuti URL yepeji rimwe rionekwe rakasiyana kune vashanyi. Muenzaniso wekupedzisira uyu - pamwe - wakaomesesa kune vashandisi vazhinji kungojaira iyo .htaccess faira. Nekudaro, ini ndakazvisanganisira kuti ndikuratidze chiyero cheicho chinogona kuwanikwa nefaira. Isa izvi kune yako .htaccess faira:
Kuenderera Mberi Ne .htaccess
Kushanda ne .htaccess faira inzira yakanaka yekudzidza nezvekuti rako reWordPress saiti rinoshanda sei padanho rakakosha, uye kukupa iwe tarisiro yehukuru hukuru hwekugadzirisa iyo kunyange yakajairwa WP saiti inokupa iwe. Paunenge iwe wagona kushanda ne .htaccess faira nekuita shanduko dzekutanga dzatatsanangura pamusoro, hupfumi hwesarudzo hunovhura kwauri. Imwe, sezvatakambofukidza, kugona gadzirisa yako WordPress blog.
Imwe ndeyekuti dzakawanda nzira dzekuvandudza yako WordPress chengetedzo inosanganisira kana kuchinja iyo .htaccess faira zvakananga, kana kushandisa iyo imwechete FTP system kuita shanduko kune mamwe midzi mafaera. Mune mamwe mazwi, kana iwe ukangotanga kutarisa mumiti nemabhaudhi epasiti yako, iwe unowana mikana isingaperi yekugadzirisa uye kugadzirisa
Tags: 301 redirecttenderakuramba kubva kune zvesefilezillaftphtaccesshtaccess fairahtaccess mafairamatchhtaccess shandura urlhtaccess nyorazve injinihtaccess chengetedzomurayiro kurambaregexWordPresswordpress backup
Gary Stevens mugadziri wepamberi. Iye wenguva yakazara blockchain geek uye anozvipira anoshandira iyo Ethereum hwaro pamwe neanoshanda anobatsira Github.
Kudzikisira: Akanaka Maitiro Ekudzivirira Kana Kugadzirisa Dzokorora Dhata reVatengi
6 Mienzaniso yeMabhizimusi Akakwanisa Sei Kukura Panguva Yekutapukira